Global Voices teny Malagasy » Manana olana fangalarana anaran’olona ny Twitter Nizeriana — fa mbola tsy mihetsika ny sehatra (orinasa) · Global Voices teny Malagasy » Print
Manana olana fangalarana anaran'olona ny Twitter Nizeriana — fa mbola tsy mihetsika ny sehatra (orinasa)
Voadika ny 08 Oktobra 2018 15:20 GMT 1	 · Mpanoratra Rosemary Ajayi Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Afrika Mainty, Nizeria, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Teknolojia
Fango Twitter namboarina indray avy amin'ny handrina Twitter an'i Daring Librarian hita ao amin'ny Flickr. Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)
Fito volana lasa izay, hita ho nandefa hafatra manokana toa hafahafa tamin'ny mpisera Twitter Matt Navarra ny minisi-panjakana Nizeriana misahana ny raharaham-bahiny, Khadija Bukar Abba Ibrahim: nangataka ny fanampian'i Navarra ity manampahefana ofisialy ity hanampy amin'ny fitehirizana “vatsy tsy nisy nitaky”. Nahatsapa fandrika (saina mena) avy hatrany i Navarra ary nisioka ny pikantsarin'ny hafatra  mifandray amin'ny kaonty Twitter an'i @MrsBukar2018.
Voatsinjo mialoha fa kaonty hosoka miseho ho Khadija Bukar Abba Ibrahim io, ary manitsakitsaka ankitsirano ny politikam-pangalaram-panondroana ao amin'ny Twitter 
Olana tsy mitsaha-mitombo ao amin'ny Twitter Nizeriana io fangalaram-panondroana io ary misy ny kaonty sasantsasany mampiasa anarana mpanao politika hanaovana propagandy raha mampiasa anaran'olo-malaza kosa ny hafa hanaovana soloky amin'ny haivarotra. Matetika kely dia kely ny fahasamihafana ary ary saro-pantarina ho an'izay mpisera tsy manana ahiahy.
Tany ampiandohan'ity taona ity, nandao ampahibemaso ny Twitter i Femi Otedola, Nizeriana miliaridera iray tamin'ny solika rehefa tsy nahavita nanaisotra ireo mpisandoka ho izy ny orinasa. Enina herinandro monja no nampiasàny ny sehatra. Efa voamarina ankehitriny ny Twitter-ny, na dia mbola andrasana aza ny hiverenany hisioka indray.
Lasa fampitandremana ho an'ireo mpisera Twitter mavitrika ireny toe-javatra ireny, manintona ny fifantohana amin'ny fahamoràn'ny famoronana sy famelomana kaonty hosoka eo amin'ny sehatra, na dia teo aza ny fampanantenana  vao haingana nataon'ny mpiandraikitra hanaisotra azy ireny. nanambara ihany koa ny orinasa fa nanafotsy kaonty hosoka hatramin'ny 70 tapitrisa tanelanelan'ny volana jona sy jolay 2018.
Nefa toa ny olom-pirenena tsy mandray karama indray no manao ny asa tsara kokoa amin'ny fandaminana ny Twitter noho ny manampahaizana manokana notendrena hanara-maso ny fanaovana hosoka sy fangalarana mari-panondroan'olona.
Tambajotran-kaonty fisolokiana miharihary
Porofoin'ny @MrsBukar2018 ny fisian'ny tambajotran-kaonty mangalatra anarana nizeriana maromaro ary mikendry ireo tsy-Nizeriana hosolokiana.
Iray amin'ny kaonty zohiany ny @Oyema201, izay mangalatra ny anaran'ny mpiara-miasa amin'i Khadija eo amin'ny fiainana andavanandro, Ny minisitra Geoffrey Onyeama misahana ny raharaham-bahiny. Io kaonty @Oyema201 io ihany no zohian'i @Khadija_Bukar, mbola kaonty iray hafa mangalatra ny anaran'i Khadija. Samy natsangana tamin'ny Janoary 2018 daholo izy telo mifandray ireo.
Naaton'ny Twitter ny @Khadija_Bukar amin'ny 30 Janoary. Na izany aza, tsy hitan'ny Twitter ho manitsakitsaka ny fitsipi-pifehezany ny @Oyema201 na ny @MrsBukar2018 — ny kaonty izay nandefa hafatra tamin'i Matt Navarra tamin'ny voalohany—.
Fito volana izay
Tamin'ny 20 aogositra, mbola miasa tsara ny kaonty @Oyema201 sy @MrsBukar2018.
Mbola misioka amin'ny mpanjohy roa sy zohiany fito (tsy nisy fiovana hatramin'ny janoary) ihany i @MrsBukar2018. Nahatratra 120 kosa ny mpanjohy an'i @Oyema201.
Jery amin'ny randram-baovaon'i @Oyema201 voatahiry no maneho fa sioka miisa 17 no nalefa tanelanelan'ny tamin'ny 7:33 maraina ka hatramin'ny 7:58 maraina tamin'ny 22 marsa . Ary fehezanteny sy fahadisoana ara-pitsipi-pitenenana mitovy avokoa izy rehetra ireo ary nalefa ho an'ireo mpandraharahan'ny fivarotana tany aman-trano, milaza izao manaraka izao:
Izaho no Atoa Geoffrey Onyeama Minisitry Nizeria misahana ny raharaham-bahiny;
Liana hiara-hiombon'antoka aminareo hampiasa vola ao amin'ny orinasanareo na sehatra hafa mety hahazoana tambombarotra ao amin'ny firenenareo. Afa-miezaka izany fiaraha-miombon'antoka izany ve ianareo,
Mampanahy indrindra ny tsy fihetsehan'i Twitter sy ny governemanta nizeriana raha jerena ny firosoan'ny raharaha Geoffrey Onyeama sy Khadija Bukar Abba Ibrahim amin'izao fanatonan'ny fifidianana ankapobeny ao Nizeria amin'ny taona 2019 izao.
Raha tratran'ny fetra eo amin'ny isa ny karazana kaonty tahaka izay tantaraintsika etoana dia feon-dakolosy mampanahy kosa ny tsy mbola nanakatonan'ny Twitter ny fijoroany rehefa anaovana fitarainana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/10/08/126364/
 nisioka ny pikantsarin'ny hafatra: https://twitter.com/MattNavarra/status/956850013962948608
 politikam-pangalaram-panondroana ao amin'ny Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-impersonation-policy
 sioka miisa 17 no nalefa tanelanelan'ny tamin'ny 7:33 maraina ka hatramin'ny 7:58 maraina tamin'ny 22 marsa: http://archive.fo/4af0i